किन जोडिँदैछ चीन अफगानिस्तानमा तालिवानसँग ? किन गर्याे शान्ति वार्ताकाे अाव्हान ? – Nepal Journal
Posted By: Nepal Journal December 27, 2017 | १२ पुष २०७४, बुधबार १३:४०
काठमाडौं । कुनै पनि देशको आन्तरिक मामलामा हत्तपत्त सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिने चीनले अफगानिस्तानका तालिवानलाई शान्ति वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ । चीनको प्रयासमा बेइजिङमा भएको त्रिपक्षीय विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकले तालिवानी लडाकुलाई शान्तिवार्तामा आउन संयुक्त रुपमा अपिल गरेको हो ।
अफगानिस्तानले पाकिस्तानमाथि तालिवान विद्रोहीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाइरहेकै बेला भएको यो बैठकलाई पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारको प्रयासका रुपमा पनि हेरिएको छ ।
चीनले यसअघि छिमेकी देशको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि मात्र सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्दै आएको थियो । चीनको यहि नीतिका कारण अतिवादीहरुले पनि उसमाथि कुनै हानी नोक्सानी गर्ने गरेका छैनन् । चिनियाँ जनमुक्ति सेना कुनै पनि देशको शान्ति मिसनमा जाने गरेको पनि छैन ।
यसपटक अफगानिस्तानमा पछिल्ला दिनमा तालिवानी आक्रमण हुन थालेपछि अकस्मात बसेको बैठकले शान्तिवार्ताको आह्वान गरेको हो । बैठकमा चीनले क्षेत्रीय शान्ति प्रवद्र्धनका लागि पाकिस्तानको भूमीमा बनाइने आर्थिक करिडोरको योजनालाई अफगानिस्तानमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्रिपक्षीय बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा चीनका बिदेशमन्त्री वाङ यीले उक्त करिडोर विकासको संवाहक बन्नेमा आफू बिश्वस्त रहेको बताए । पाकिस्तानसँग जोडिएको आर्थिक करिडोर क्षेत्रमा बेइजिङले करिब ५७ अर्व डलर बराबरको लगानी गर्दैछ । जसमा चीनको पश्चिमी शहरदेखि पाकिस्तानको बन्दरगाहसम्म रेलवे लाइन र पाइपलाइन निर्माण हुनेछ ।
अार्थिक समृद्धिका ‘गफ’ हाँक्ने नेताले हेर्नै पर्ने भिडियाे
चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङ आज नेपाल आउँदै
Be the first to comment on "किन जोडिँदैछ चीन अफगानिस्तानमा तालिवानसँग ? किन गर्याे शान्ति वार्ताकाे अाव्हान ?"